Abakhiqizi base China Outdoor Co-extruded Wood Composite WPC U-Lihua
Ubunikazi bemikhiqizo:WPC khazi
Intengo:$ 3.84 / M
Umbala:Chocolate, Grey, Red Brown, Brown noma ngezifiso
I-Co-extrusion WPC Cladding
Indawo yokubhukuda, ingadi yangaphandle
Ibhulashi noma iSanding
● I-Co-extrusion, ubuchwepheshe bamuva ebangeni elihlanganisiwe lokhuni, lobu buchwepheshe be-cap obuphambili buhlanganiswe ngokuxhuma, izinto zayo zobuso ezivalekile yilokho okunikeza ibhodi ngalinye ukusebenza okuhlukile nokuphakeme.Izici zokuvikela ikepisi zenza ibhodi le-co-extrusion lizinze ngokweqile , ubuso abuzukunweba futhi bufane nezinye izingxube, okwamanje ukumunca ukushisa okuphansi kusho ukuthi izinyawo ezingagqokile zizoyithanda, kanye nokuqina kwayo okuphezulu kwe-UV umbala wayo ongokwemvelo uzohlala iminyaka.
● Iphaneli lodonga elihlanganisiwe likaLihua lifinyelela ekugcineni kombala okuguquguqukayo nokuyiqiniso, ngokuqhathanisa kuphela nokhuni lwemvelo, lobu buchwepheshe obuthuthukile nobusha buvumela ukuhlanganiswa kombala okungakholeki, kunikeze enye yezingubo ezihlanganiswe kahle kakhulu!
Akunandaba umbala ojwayelekile noma umbala wokuxuba, singenza njengesinqumo sakho.Uma umbala othile okhethekile wokumbozwa kodonga, sicela usithumele amasampula akho.
Ukwehla kokumelana nomthelela omkhulu EN 15534-1: 2014 Isigaba7.1.2.1
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.1 Azikho kuma-specimen ezizokhombisa ukwehluleka Akukho ukuqhekeka kwezinhlobo zokuhlola
Izakhiwo ze-Flexural EN15534-1: Isithasiselo sika-2014
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.2 Ukweqa ngaphansi komthwalo ka-500N -5.0mmUkugoba amandla
Umthwalo omkhulu ekuqhekekeni Ubuso Bangaphambili: Umthwalo omkhulu: Kusho u-1906N
Ukweqa ku-250N: Kusho u-0.64mm Ubuso obungemuva:
Umthwalo omkhulu: Kusho i-1216N
Ukweqa ku-250N: 0.76mm
Ukumunca ukuvuvukala namanzi EN 15534-1: 2014 Isigaba8.3.1
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.4 Kusho Ukuvuvukala: ≤10% ngogqinsi, ≤1.5% ububanzi, .60.6% ubude
Ukuvuvukala okukhulu: ≤12% ngogqinsi, ≤2% ububanzi, ≤1.2% ubude
Kusho: ≤8%, Max: ≤10% Ukuvuvukala Okusho: 2.25% ngobukhulu, 0.38% ububanzi, 0.15% ubude
Ukuvuvukala okuphezulu: 2.31% ubukhulu, 0.4% ububanzi, 0.22% ubude
Ukumuncwa kwamanzi: Kusho: 5.46%, uMax: 5.65%
Umugqa wokulingana wokukhulisa oshisayo EN 15534-1: 2014 Isigaba9.2
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.5 ≤50 × 10⁻⁶ K⁻¹ Okushiwo: 46.8 x10⁻⁶ K⁻¹
Donsa ukumelana EN 15534-1: 2014 Isigaba7.7
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.6 Phoqelela ukwehluleka: 479N,
Inani elisho: 479N,
Imodi Yokwehluleka: 479N
Kube nokuqhekeka esilinganisweni sokuhlolwa
Ukuguqulwa kokushisa EN 15534-1: 2014 Isigaba9.3
EN 15534-5: 2014 Isigaba 4.5.6 Izinga Lokushisa Lokuhlola: 100 ℃ Kusho: 0.09%
Langaphambilini I-Eco-friendly Wood Composite Co-extrusion WPC Decking
Olandelayo: Manzi esiyinhlanganisela Ngokhuni WPC Imbali Imbiza For Garden Park
ukulanda ukufakwa komhlahlandlela wokufakwa odongeni
I-Q1: Udlulise hlobo luni lwesitifiketi?
A: Imikhiqizo yeLihua ihlolwe yi-SGS nge-EU WPC yokulawula ikhwalithi ejwayelekile EN 15534-2004, isilinganiso somlilo se-EU esijwayelekile ngebanga lokulinganisa umlilo le-B, i-American WPC e-ASTM ejwayelekile.
I-Q2: Udlule kusiphi isitifiketi?
A: siqinisekiswe nge-ISO90010-2008 Quality Management System, i-ISO 14001: 2004 uhlelo lokuphathwa kwemvelo, i-FSC ne-PEFC.
I-Q3: Yimaphi amakhasimende osuwadlulile ukuhlolwa kwemboni?
A: Amanye amakhasimende avela ku-GB, Saudi Arabia, Australia, Canada, njll avakashele ifektri yethu, bonke banelisekile ngekhwalithi nensizakalo yethu.
I-Q4: Lunjani uhlelo lwakho lokuthenga?
I-1: khetha okokusebenza okulungile esikudingayo, hlola ikhwalithi yezinto ezinhle noma cha
2 hlola okokusebenza kufaniswe nesidingo sethu sohlelo kanye nesitifiketi
3 ukwenza ukuhlolwa kwento, uma kudlulisiwe, khona-ke kuzobeka ukuhleleka.
Q5: Lithini izinga labahlinzeki benkampani yakho?
I-Q6: Isikhunta sakho sisebenza isikhathi esingakanani ngokujwayelekile? Ungayigcina kanjani nsuku zonke? Yini amandla esethi ngayinye yokufa?
Q7: Iyini inqubo yakho yokukhiqiza?
Q8: Sinesikhathi esingakanani isikhathi sokulethwa esijwayelekile semikhiqizo yakho?
Q9: Ingabe unayo ubuncane be-oda ubuncane? Uma kunjalo, lithini inani elincane le-oda?
Q10: Uyini umthamo wakho ophelele?
Ukukhishwa kwe-WPC okuhlanganisiwe
Ukugqokwa kodonga lwangaphandle lwe-WPC
Amanzi Co-extrusion WPC Wall khazi
Ukufakwa kwe-WPC ngaphandle
Iphaneli yodonga lwe-WPC co-extrusion
I-WPC Wall Panel Yangaphandle
Manzi Izinkuni esiyinhlanganisela Plastic Co-extruded W ...
ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela, WPC phansi, WPC decking esiyinhlanganisela, WPC decking ongaphandle, Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle, WPC decking phansi,